Uyenza njani imifanekiso ngombhalo | Abadali be-Intanethi
Uyenza njani imifanekiso ngombhalo
Umfanekiso, ngokwawo, sele uthetha kakhulu. Kodwa ukuba uyikhapha negama, okanye ibinzana, inokuba nentsingiselo engakumbi. Nangona kunjalo, abaninzi bacinga ukuba, ukuba awuyena umyili, oko kuyinkimbinkimbi kakhulu, kwaye inyaniso kukuba akukho nto ingaphezulu kwinyani. Namhlanje, ukwazi ukwenza imifanekiso ngombhalo kulula kakhulu kwaye kukho izixhobo ezininzi zasimahla ekuvumela ukuba wenze njalo, kubandakanywa neintanethi zentlalo ngokwazo.
Kodwa uyenza njani? Yintoni omele uyinikele ingqalelo? Ukuba uneefoto ezininzi ongathanda ukongeza isicatshulwa kuzo kodwa zange ucinge ngayo kuba ucinga ukuba kunzima, ngoku uya kubona ukuba kulula kunokuba unokucinga okomzuzwana.
1 Kutheni ubeka isicatshulwa emfanekisweni?
2 Iinkqubo zokwenza imifanekiso ngokubhaliweyo
2.1 Iinkqubo ezifakwe kwikhompyuter yakho
2.2 Imidiya yoluntu njengabapapashi
2.3 Iiwebhusayithi kunye neenkqubo ze-intanethi zokwenza imifanekiso ngesicatshulwa
2.3.2 Yicengceleze oku
Kutheni ubeka isicatshulwa emfanekisweni?
Khawufane ucinge unomfanekiso wekati ejonge phezulu ngala mehlo abanzi. Eyona nto iqhelekileyo kukuba ujonge emfanekisweni kwaye ekugqibeleni uyamomotheka. Kodwa ngokuqinisekileyo ikwakukhumbuza ngento ethile yemihla ngemihla yakho. Mhlawumbi kubuso obuncinane abenziwa ngabantwana bakho xa befuna into ethile.
Mhlawumbi ulindele ukuba ikati ithethe amagama akukhumbuze ngalo mntu (okanye imuvi). Kodwa ke, ngumfanekiso... Ngokwawo uyamangalisa, kodwa ngokubeka isicatshulwa kuwo into oyenzayo. Ugxininisa ngakumbi umyalezo kwaye, kwelinye icala, ugxininisa nabani na oyibonayo kwinto ofuna ukuba bacinge ngayo (kule meko, umntu ngamnye oyibonayo unokuba nezimvo ezahlukeneyo).
Ukubeka isicatshulwa kwimifanekiso kuqhelekile, umzekelo, ukwenza iimemes (imidlalo, abantu abadumileyo, njl.njl.) apho ngamnye enika inguqulelo yakhe kunye nokutolika kwefoto (yiyo loo nto ufumana uninzi oluneetekisi ezahlukeneyo).
Kwaye kunzima ukwenza oko? Hayi kakhulu! Ngokwenene kulula kakhulu ukuyenza kwaye awudingi nokuba nolwazi loyilo ukuze uyenze.
Iinkqubo zokwenza imifanekiso ngokubhaliweyo
Namhlanje uneenkqubo ezininzi ezikunceda wenze imifanekiso enemibhalo kwimizuzwana nje. Ngaba uyafuna ukuba sikunike imizekelo?
Iinkqubo ezifakwe kwikhompyuter yakho
Siqala ngezo nkqubo ezifuna ukufakela ukusebenza. Banenzuzo yokuba iifoto akufuneki zifakwe kwi-Intanethi. Kwaye kukuba, ukuba ziifoto zabucala okanye awufuni ukuba zisasazeke kwinethiwekhi ngaphandle kokuba nolawulo lwazo, olu khetho lungcono.
Kule meko sinako cebisa iPhotoshop, GIMP okanye nawuphi na umhleli wemifanekiso. Zonke zinomsebenzi wokongeza umbhalo kumfanekiso kwaye unokutshintsha uhlobo lwefonti, umbala wefonti, ubungakanani, njl. Unokwenza iziphumo ezahlukeneyo ngoonobumba okanye wenze i-animated gif endaweni yemifanekiso engatshintshiyo.
Bane-drawback, kwaye oko kukuthi, Kanye njengoko zilungile ukugcina iifoto zakho zikhuselekile, zintsonkothile ngandlel’ ithile ukuzisebenzisa ukuba awuzange uzisebenzise ezi zixhobo ngaphambili., nto leyo enokukwenza ukhathazeke kwaye ungafuni ukuqhubeka nayo. Yinto eqhelekileyo ngokupheleleyo, kodwa ngesifundo seYouTube ngokuqinisekileyo uya kuba nakho ukuyikhupha kuba akunzima ngokwenene ukongeza isicatshulwa. Enye into inokuba ukuba ufuna ukongeza iziphumo ezikhethekileyo okanye ufumane ifonti ecokisekileyo. Kodwa ngaphaya kokubeka amabinzana athile kwaye mhlawumbi nesithunzi sokuwenza acace ngakumbi, awuyi kuba nangxaki kakhulu nabanye.
Imidiya yoluntu njengabapapashi
Uninzi lweenethiwekhi zentlalo, ezinje ngoFacebook, zinomsebenzi wokuhlela umfanekiso kwaye unokongeza ii-icon, i-emojis, kunye nesicatshulwa. Ngokuqinisekileyo, ayiyi kukunika iinketho ezininzi, kuba iyancipha kakhulu, kodwa ukwenza iqhinga akubi.
Nangona kunjalo, Ayisiyiyo enye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisa ngenxa yokuba unemida emininzi xa kuziwa ekubekeni isicatshulwa ngendlela ethile.
Iiwebhusayithi kunye neenkqubo ze-intanethi zokwenza imifanekiso ngesicatshulwa
Ukuba awufuni ukutshisa kakhulu intloko yakho kwaye wenze imifanekiso ngamabinzana kwimizuzu nje embalwa, ke kungcono ukusebenzisa izixhobo ze-intanethi kunye nezicelo ezigcina ixesha elininzi.
Phakathi kwezo sinokuzicebisa koku kulandelayo:
Lelinye lamaphepha apho, ukulisebenzisa, kuya kufuneka ubhalise, kodwa kufanelekile kwikhathalogu yayo yemifanekiso (zonke simahla ukuze uphephe iingxaki copyright, kwaye kananjalo 17 iintlobo ezahlukeneyo zoonobumba. Ikuvumela ukuba uzibeke naphi na apho ufuna khona, ukuba zikhulu okanye zincinci, kwaye ziyahambelana nefoto. Yintoni enye onokuyicela?
Kule meko esi sixhobo umda kakhulu kuba konke omawukwenze kukubeka ibinzana, elifunayo, kwaye emazantsi likunika iinketho ezininzi (yahluke kakhulu enye kwenye) ukuze ubone ukuba ikhangeleka njani na kuzo zonke.
Ngokuqinisekileyo, inqunyelwe kwimifanekiso embalwa kuphela, oko kuthetha ukuba, ukuba uchitha yonke into, eli phepha alisayi kuphinda likukhonze.
Kule meko ungasebenzisa inguqulo yasimahla apho ungabhalisi kwaye konke okufuneka ukwenze kukwenza layisha umfanekiso kwaye uqale ukumosha ngokuthanda kwakho. Xa ugqibile, uneefonti ezininzi onazo ukuze ubeke ibinzana elifanelekileyo lalo mfanekiso. Ngoko ke, nangona izakuthatha ixesha elidana kunamanye amaphepha, iya kuba luyilo oluphantse lwenziwe ukusuka ekuqaleni nguwe (ifana nenkqubo yokuhlela umfanekiso kodwa ilula).
Kwaye uthetha ngeenkqubo zokuhlela umfanekiso, unePixir, ekukhanyeni okanye kwinguqulelo epheleleyo. Zombini zisimahla kwaye ezipheleleyo zisebenza njengePhotoshop. Kodwa ukuba awunabo ubuchule obuninzi, sincoma inguqulo yokukhanya.
Unayo imifanekiso yasimahla kunye neefonti ezininzi ongakhetha kuzo ngelo binzana ofuna ukulibeka. Kwakhona, unokutshintsha ubungakanani befonti, imibala, ukuyithambeka, kunye nezinye iimilo ezininzi.
Ukuba ufuna ukuba nayo ubuncinane 50 iinketho ongakhetha kuzo, chromatic okunokwenzeka kunye nezinye iifowuni ukuba ingqalelo (njengonobumba wokuqala ujongeka njenge icon), ke kufuneka uzame esi sixhobo.
Konke okufuneka ukwenze kukugqiba malunga noyilo kwaye yiloo nto, eneneni akudingeki ukuba ucinge ngemifanekiso.
Ine-drawback enye kuphela kwaye kukuba, ukuyisebenzisa, kufuneka ubhalise.
Njengoko ubona, zininzi iinketho zokwenza imifanekiso ngombhalo. Udla ngokwenza njani?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Uyenza njani imifanekiso ngombhalo
Indlela yokwenza isigqubuthelo